Nezvedu - Xuzhou Sanhe Otomatiki Kudzora Zvishandiso Co., Ltd.
Xuzhou Sanhe otomatiki Kudzora Equipment Co, Ltd.
Fekitori Nyika / Nharaunda: TongShan Economic Development zone
1 000-3,000 mativi emamita
OEM Service Yakapihwa
US $ 10 Miriyoni - US $ 50 Million
Xuzhou Sanhe Otomatiki Kudzora Zvishandiso Co., Ltd. yakavambwa muna Kubvumbi 2005, ichishandisa R & D, kugadzirwa nekutengesa kwe microcomputer tembiricha controllers, humidity controllers, yakasanganiswa mota vadziviriri, mafiriji ekudzora mabhokisi, yakafanana unit control mabhokisi, kutonhora kuchengetedza PLC kudzora makabati, nezvimwe zvisere zvisere zvinopfuura mazana maviri emhando yezvigadzirwa zvinonakidzwa nemukurumbira wakakwirira kumba nekune dzimwe nyika. Iyo kambani parizvino ine vanopfuura vashandi makumi masere, pakati pavo vanopfuura makumi manomwe neshanu muzana evashandi vane dhigirii rekoreji kana pamusoro; chirimwa chekambani chiripo chinofukidza nharaunda inopfuura zviuru mazana mana emamirimita, mitsara gumi yekugadzira, uye kugadzirwa kwegore uye kugona kweanopfuura maseti mazana matatu mazana matatu (seti). ), ine hunyanzvi hwekugadzira uye yekuyedza michina, uye ine inoenderana muyero wekuongorora uye kuyedza zviyero. Iyo kambani iri GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015 yemhando yepamusoro sisitimu sisitimu yeyuniti. Zvigadzirwa zvakawanda zvakapfuura Certification yeEC, kunze kwekutengesa. Iyo ine zvekutengesa uye zvekushambadzira zvitoro mumaguta mazhinji nematunhu munyika yese, uye inoverengeka anozivikanwa mabhizinesi epamba Anopa ekutsigira masevhisi.
Xuzhou Sanhe ine yega "inotonhorera kuchengetedza PLC mainjiniya tekinoroji yekutsvagisa nzvimbo" muChina. Vatsvagiri vetekinoroji nzvimbo vane yakasimba dzidziso dzidziso uye makore eanoshanda chiitiko vari kuita firiji kudzora uye PLC tekinoroji. Panguva imwecheteyo, iyo yekutsvagisa nzvimbo inochengetedza kwenguva refu-tekinoroji nemazhinji epamba makoreji nemayunivhesiti. Cooperation, yakawanda nyanzvi uye hwokugadzira vashandi uye bvunzo uye kuongorora zvishandiso mumayunivhesiti zvinopa rutsigiro rwakasimba pabasa reInjiniya Technology Center.Semutungamiri mune otomatiki ekudzora michina indasitiri, Xuzhou Sanhe Automatic Control Equipment Co, Ltd. yakazvipira kuvaka mutungamiri mune otomatiki ekudzora michina indasitiri nekuda kweiyo sevhisi-yakatarisana nebasa rekuvandudza, mweya unoshamisa wekushanda nesimba, uye hunyanzvi hwehunyanzvi hwekugona.
Iyo kambani inoverengeka pakati pevane misere vepamusoro muindasitiri yefriji yepamba, ine mugove wemusika unosvika 8%. Kuparidzirwa kwemusika: kufukidzwa kwepamba kwemapurovhinzi makumi matatu nemasere, matunhu, nzvimbo dzakazvimiririra, nemaguta, vatengi vevatengesi vanopfuura mazana matatu, uye vanopfuura zana vatengi vanotsigira; chiyero chekutumira kunze: chakaverengerwa Chikamu chinosvika makumi matatu neshanu% yekutengesa kwese kunotengeswa kunyika nenharaunda: Nyika dzinosanganisira nyika dzeEuropean, Middle East, Hong Kong, Taiwan nedzimwe nzvimbo. Raw zvinhu zvekushandisa: Kune vanopfuura makumi masere vanopa bhizimusi, vanopfuura makumi matanhatu muzana ndiwo epasirese anozivikanwa maronda, uye mamwe ese ari epamba anozivikanwa Brand
7 Yakasimudzwa Mitsara Yekugadzira
Zvigadzirwa zvekambani iyi microcomputer zvigadzirwa zvemagetsi zvekushandisa zvigadzirwa. Iwo machipisi anoshandiswa akatsiga mukuita, akazara mumabasa, aine akawanda dziviriro, epamberi uye anonzwisisika dhizaini dhizaini uye maitiro ekugadzirisa, uye hunyanzvi hwehunyanzvi hwapasirese epamberi uye epamberi epamberi. Iyo kambani inokoshesa kukosha kukuru mukugadzirwa kwechigadzirwa uye ichienderera ichitora zvinhu zvitsva, matekinoroji matsva uye maitiro matsva, kuitira kuti kukwidziridzwa kwezvigadzirwa kwagara kuri pamberi peiyo firiji indasitiri. Kwemakore, chiyero chekugadzira chakaramba chichiwedzera uye chikamu chemusika chave chichiwedzera zvishoma nezvishoma. Chigadzirwa chine akasiyana mafomu ekushandisa mumunda wefriji uye firiji kugadzirisa uye indasitiri. Iyo kambani inogona kugadzira uye kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Yakarongwa pakati pevane misere yepamusoro muindasitiri yefriji yemumba
Xuzhou Sanhe yakazvipira kuve nyanzvi mumunda wesimba rekugadzirisa manejimendi uye otomatiki kutonga, kubatsira indasitiri kugadzirisa nekupa kwakabatana matekinoroji nemhinduro. Kubva payakamisikidzwa, kambani yakaendesa zvinopfuura mamirioni matanhatu mayuniti / seti yezvigadzirwa kumisika yepamba neyekunze. Izvi zvigadzirwa zvinoshandira maindasitiri mazhinji: firiji, kemikari, yekugadzira bhaira, kuchengetedza mvura (kuwanikwa kwemvura), kugadzira michina, uye kurwisa moto (kudzora kwekuvaka) Mumakore apfuura, kambani yedu yakapa mhinduro dzakarongeka dzemamwe mapurojekiti. Huru idzi dzinosanganisira iyo kongiri inotonhorera chirongwa cheBaihetan Hydropower Station; iyo inotonhorera yekuchengetedza chirongwa cheMacau Cross-muganho Industrial Park, inodyiwa fungus maindasitiri epaki chirongwa cheZhenfeng County, Guizhou Province, Lengyang County, Luoyang Makuru-epakati mabhakitiriya ezvekurima ari kuberekera raibhurari chirongwa, Hangzhou Ruihui Bio-mishonga inogadzira base kutonhora kuchengetedza chirongwa, zvisinei kuti zvigadzirwa zveSanhe zviripi, vakaita zvakanaka uye vakakunda kurumbidzwa kwakapararira kubva kune vatengi.
Saizi yemusika wekambani yedu yasvika 29.85 miriyoni yuan
Muna 2020, kambani yakasimbisa Jiangsu Sanhe Control Technology Research Institute. Sangano rekutsvagisa rakavakirwa mukuitwa kweinogadziridza-inotungamirwa zano rekuvandudza. Panguva imwecheteyo, inoshanda pamwe nemayunivhesiti uye makoreji uye inoziva shanduko yesainzi yekutsvagisa zvirongwa. Mune ramangwana, iro rekutsvagisa rinozove repamusoro-soro nyowani mhando yemhando yepamusoro-yekupedzisira matarenda muindastiri. Masisitimu eR & D anosimudzira kusangana nekusimudzira kwematarenda, matekinoroji, mapurojekiti, zvigadzirwa uye zvimwe zvinhu zvine hunyanzvi kumatunhu nemaindasitiri. "Shamwari uye yakatendeka, kugovana budiriro" ibhizimusi redu uzivi uye kutsvaga kwedu kusingazungunuke. "Tevera kugona, kuzvipfuudza pachedu" ndicho chishamiso chishambadziro chedu chekushambadzira nekubudirira kwebasa. Tichitarisira ramangwana, Sanhe acharamba achitora "zvishandiso zvitsva, matekinoroji matsva, uye maitiro matsva" seiri basa rayo, "kutsvaga kugona, kuzvipfuura" mukufembedza kwemvura, kubudirira mukuvandudza, nekubatana maoko nevamwe kuvaka ramangwana rakajeka.
digital thermostat controller, Incubator tembiricha controller, otomatiki tembiricha kudzora, thermostat tembiricha controller, aquarium yedhijitari thermometer, thermometer yedhijitari,